स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, के-के विषय परे ? – Sudarshan Khabar
स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, के-के विषय परे ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ । गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा २२ अर्ब ९ करोडले बढी हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि यस वर्ष २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख बजेट माग गरेको थियो भने अन्य नियमित कार्यक्रम र चालु खर्चका लागि ५४ अर्ब ८३ करोड प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुख्य गरी संक्रामक रोगहरुको उपचार नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको लागि १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ भने संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि ५ लाखको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नती गरिने छ
‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ यो वर्षबाट शुरुवात गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संक्रामक रोगको उपचार गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको क्षमता विस्तार गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहमा थप २ सय ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नका लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी क्षयरोग, यौन रोग जस्ता रोगहरुको उपचार निदानका लागि ४ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चालीस वर्ष माथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नती गरिनुका साथै प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नती गरिने भनिएको छ ।
आम नागरिकलाई योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गरिने भनिएको छ । मेडिकल उपकरणदेखि लिएर औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए स्थापनाको कार्यक्रम यही वर्षबाट सुरुवात गर्ने भनिएको छ ।